88 New Generation Students: November 2010
To release all political prisoners and ethnic leader in Burma
စစ်အာဏာရှင်များ၏ မတရားဖမ်းဆီးထောင်ကျခြင်းကို ခံနေရရှာသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသော ဆန္ဒပြပွဲကို ကျောင်းသားလူငယ်မောင်မယ်များ နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများ တတပ်တအားပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့သည်။
Posted by Burmese Student UK at 20:02
Boycott Burmese Elections March in London
Burma Democratic Organisations based in the UK marched around London to show their solidarity with Daw Aung San Suu Kyi and the people of Burma. A demonstration outside the Burmese Embassy, marched past Downing Street and ended outside of the Houses of Parliament encouraging people not to vote in the Burmese elections and calling for Aung San Suu Kyi to be freed.
Posted by Burmese Student UK at 23:40
To release all political prisoners and ethnic lead...